Hawlaha jawiga, maxay yihiin? | Cusbooneysiinta Cagaaran
Fausto Ramirez | | Tababar, General
Hawlaha jawigu way badan yihiin waana kala duwan yihiin Laakiin si aan si fiican u fahamno doorkeeda, waxaan wax yar ka baran doonnaa waxa ka dhacaya meeraheenna.
El meeraha dhulka kubad walax ah ku dhex jirta meel bannaan. Heerkulka ku wareega hawada sare waa eber dhammaystiran, meerahana wuxuu ku qaboojiyaa dusha yar, wax u eg harooyinka oo aan biyahoodu gebi ahaanba qabsan doonin baraf. Kulaylka bartamaha Earth waxay si joogto ah uga gudubtaa qolofka khafiifka ah si ay ugu baxsato booska. Kuwani waa falcelinta tectonic ee sababa dhulgariirrada iyo qaraxyada folkaanaha.
Muuqaaladan ayaa joogsan doona oo keliya markii dhammaan kuleylka xad dhaafka ah ee ka dhasha sameynta meeraha la daadgureeyo Dusha sare ee aan ku nool nahay waa dusha kala-go'idda meeraha iyo nolosha bannaan, annagoo faraxsan, waxaa jira jawi xoogaa naga go'doominaya.
Markuu arkay xaaladaha ka jira caalamka, waxaan kaliya taageernaa jawi aad u takhasus badan.
1 Hawlaha ugu muhiimsan ee jawiga
2 Lakabyada kala duwan ee jawiga
Hawlaha ugu muhiimsan ee jawiga
ka heerkulka galkoodu u dhexeeyaa -273 ° C illaa dhawr milyan oo digrii, oo waxaan kaliya taageernaa inta udhaxeysa -30 iyo 60º C togan. Shucaac dhex martay galaxyada waxayna u dhexeeyaan shucaaca ugu yar ilaa hirarka ugu ballaaran ee raadiyaha. Waxaan kaliya taageernaa qaybta ugu yar ee iyaga ka mid ah, kuwa ka sarreeya ultraviolet, had iyo jeerna tiro aad u tiro badan.
Waxaan adkeynaa ugu badnaan toban jeer cadaadiska Hawada, kore ama ka hooseeya, tanina nama ogola in aan aadno meelkasta oo meeraha ah, iyo in badan oo ka mid ah meelaha banaan, halkaasoo cadaadiska uu yahay eber, ama meydad aad u adag oo lagu dhufto 50 ama 100
Xaqiiqdii, si jirkeenu ugu shaqeeyo si caadi ah, waxaan u baahanahay inaan la kulanno seddexdan xaaladood, kuleylka, shucaaca iyo cadaadiska, iyo waliba jawiga neefsashada leh. Meeraha Earth Waa midka kaliya ee aan ognahay, ilaa maanta, ee buuxinaya shuruudaha lagama maarmaanka u ah qaab nololeedkeena taasna waxaa u sabab ah howlaha jawiga.
Lakabyada kala duwan ee jawiga
Hadda oo aan ognahay waxa ay hawadu tahay, aan aragno lakabyada ka kooban.
Jawigayagu wuxuu u qaybsan yahay lakabyo kala duwan waxay kuxirantahay walxaha kiimikada iyo heerkulkeeda. Kuwani waxay isku darsamaan inay abuuraan gaashaan difaac ah oo ilaaliya dheelitirka tamartayada muhiimka u ah nolosha Dunida.
ka ifafaale saadaasha hawada Waxay ku dhacaan lakabka ugu dhow qorraxda, troposphere. Diyaaraduhu waxay ku duulaan stratosphere halkaasoo lakabka ozone sidoo kale laga helo. Wixii intaas dhaafsiisan waxaa ku yaal lakabka ugu qabow ee jawiga, mesosphere, halkaasoo loo diro baaritaanka buufinnada ay ka buuxdo helium-ka. Ugu dambeyntiina, heerkulku si tartiib tartiib ah ayuu u baaba'ayaa bannaan.
Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato meeraha Dunida? Ha moogaanin qodobkan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Tababar » Hawlaha jawiga
waa maxay shaqadu
Ku jawaab hhhhhhh
waxba iima tarin aniga
Shaqo ma soo baxdo, uma shaqeyso waxa aan raadinayo
Ku jawaab mneicoea